SPTAG: yakavhurika sosi muchina kudzidza algorithm kubva kuMicrosoft | Linux Vakapindwa muropa
SPTAG: yakavhurika sosi muchina kudzidza algorithm kubva kuMicrosoft
Mazuva ano injini dzekutsvaga dzakachinja zvakanyanya sezvo ivo vasingangopihwa chete nekungodzosera iwo mapeji mushure mekugamuchira rimwe kana mamwe mazwi akakosha, asi ivo zvakare vanoedza kupindura mibvunzo, vanoratidzira mamiriro, nezvimwe. Vashandisi vanotova nekwaniso yekutsvaga kubva kune zvimwe zvinhu, senge mifananidzo.
Ehe saizvozvoKutevera zvido zvevashandisi hazvisi zvitsva: Zvave zvakaoma kurwa kubva kutanga kwekutsvaga kwewebhu.
Asi ikozvino, zviri kuwedzera kuoma kuzadzisa izvi zvido inogara ichichinja, nekuda kwekufambira mberi kwehungwaru hwekunyepedzera, kusanganisira izvo zvakagadziriswa neboka rezvekutsvagisa reBing uye vaongorori muMicrosoft Research Lab.
"Chakagadzirwa njere chinoita kuti zvigadzirwa zvatinoshanda nazvo zviwedzere uye zvakasikwa", Rangan Majumder akati, Boka Chirongwa Manager weMicrosoft Bing Research uye Artificial Intelligence timu.
1 Uchishandisa maveji kutsvagisa zvirinani
1.1 Space Chikamu Chikamu Muti uye Girafu yakaburitswa senge yakavhurwa sosi
Uchishandisa maveji kutsvagisa zvirinani
ari Bing's muchina wekudzidza algorithms anoshandiswa kugadzira vectors, (zvinomiririrwa nedigital yeshoko, pikisi yemufananidzo, kana imwe poindi yedata). Vector inobatsira kutora izvo chidimbu che data chinonyatso kureva, ngazvive zvinyorwa pawebhu peji, mifananidzo, ruzha kana mavhidhiyo.
Kamwe kana iyo nhamba yenhamba yakapihwa kune data kutsunga, inogona kuronga kana mepu vectors, nenhamba dzepedyo dzakaiswa padhuze nepadhuze kuratidza kufanana. Iyi mhedzisiro inoratidzwa kune vashandisi, kugadzirisa mhinduro dzekutsvaga.
Microsoft yakatanga kutarisisa iyo tekinoroji iyo yakavakirwa Bing vector kutsvagisa apo mainjiniya ekambani paakatanga kucherechedza mapatani asina kujairika mumatanho ekutsvaga kwevashandisi.
"Nekuongorora magazini edu, timu iyi yakaona kuti mibvunzo yekutsvaga yakanga ichireba uye yakareba," akadaro Majumder.
Izvi zvakaratidza kuti vashandisi vaibvunza mimwe mibvunzo, vachipa zvakadzama zvakawandisa nekuda kwemhedzisiro yapfuura iyo yanga isingagutsikane nekutsvaga kwemazwi, kana "kuyedza kuita semakomputa" pavanotsanangura zvinhu zvisingawanikwe.
NeBing Kutsvaga, vectorization yakawedzera kusvika pamusoro peanopfuura mamirioni zana nemakumi mashanu akaiswa data injini dzekutsvaga kuvandudza kuenzanisa neyakajairika mazwi akakosha.
Izvi sanganisira mazwi akapusa, mavara, mapeji ewebhu peji, mibvunzo yakazara, uye zvimwe mhizha. Kamwe mushandisi paanotsvaga, Bing inogona kuongorora iwo akanyorwa mavheji uye nekupa akanakisa mutambo.
Vector mepu yakaumbwa zvakare uchishandisa yakadzika yekufunda tekinoroji yekuenderera nekuvandudza.
Mienzaniso inofunga nezvekupinza senge yekupedzisira-mushandisi kudzvanya mushure mekutsvaga kuti unzwisise zvinorehwa nekutsvaga uku.
Space Chikamu Chikamu Muti uye Girafu yakaburitswa senge yakavhurwa sosi
Ichokwadi, Microsoft inoshandisa algorithm inonzi Space Partition Muti uye Girafu (SPTAG). Mubvunzo wekuisa unoshandurwa kuita vechita, uye SPTAG inoshandiswa kukurumidza kutsvaga "vavakidzani vepedyo," ndokuti, maveji akafanana neakapinza.
"Microsoft inoshandisa vector kutsvaga injini yekutsvagisa yeBing, tekinoroji inobatsira Bing kuti inzwisise zvirinani kutsvagisa kwekutsvaga webhu uye kuwana mhedzisiro inoenderana nemabhirioni emapeji ewebhu."
Microsoft yaita kuti iwanikwe kune wese munhu, seyakavhurwa sosi purojekiti paGitHub,
"Imwe yezvigadzirwa zvehungwaru zvemberi uye zvakanakira kusangana nezvinogara zvichitsvaga zvekushandisa kwevashandisi."
NeChitatu, muparidzi akatumirawo masystem evashandisi uye vhidhiyo yekufambidzana yezvishandiso izvi kuburikidza neyeMicrosoft yekunyepedzera labhu.
Chikwata cheBing chakataura kuti vanotarisira kuti yakavhurwa sosi yekupa inogona kushandiswa nemakambani makuru kana kunyorera kuti uone mutauro unotaurwa zvichibva pachidimbu cheodhiyo, kana pamasevhisi anosanganisira mifananidzo yakawanda, senge chishandiso chinobvumira vashandisi kuenzanisa data nekusecha
Kodhi yekodhi yeSpTAG
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » SPTAG: yakavhurika sosi muchina kudzidza algorithm kubva kuMicrosoft
IPFire inogadziridzwa kuwedzera iyo yekudzivirira yekudzivirira system
LivePatch pane Disco Dingo: vimbiso iyo isina kumbobvira yachengetwa